RS (Lahatsoratra iray, momba ny tantara ratsy mety hiteraka tsy fahazoan-kevitra) | Avy amin'ny Linux
RS: Fohy amin'ny fihomehezana. Nampiasain'ny Breziliana tamin'ny toe-javatra mitovy amin'ny LOL. Teny hafa ampiasaina dia Huahuehuahue sy kkkkk.
Tsy tian'i Richard Stallman mihitsy ny tsy fifankahazoan-kevitra. Ho an'ny zavatra ao amin'ny tranokala FSF dia misy a teny glossary Manoro hevitra izy ireo mba tsy hampiasa, satria mitarika fikorontanana izy ireo na satria manana fiheverana izay tsy mitombina tanteraka. Saingy tsy miresaka momba io karazana tsy fahazoan-kevitra io ity lahatsoratra ity, fa momba iray manokana nipoitra rehefa nanao fihaonambe tany Brezila.
Ity no horonan-tsary maharitra 22 minitra. Ny 15 minitra voalohany dia resaka (raha misy ianareo te-handre azy) ary nomeny tamin'ny teny anglisy izy satria nolazain'ny mpikarakara azy fa mety ny fitenin'ilay lahateny na amin'ny anglisy na espaniola (ary nifidy anglisy izy satria tenin-drazany). Ho an'ny 15 minitra amin'ny horonantsary (tsy fantatra aorian'ny resaka firy minitra), misy mpikarakara milaza azy amin'ny anaran'ny sasany misy olona tsy mahazo izay noteneniny sy nangatahiny raha mahay miteny espaniola ianao.
Toy ny Nino ilay mpikarakara fa hahatakatra ny anglisy ny olona ary tsy izany no izy. Nanontany i Stallman hoe firy no tsy nahatakatra, ary ao amin'ny horonantsary dia tsy hita izany, saingy tokony nanangan-tanana izy ireo maro olona ……………… .. ratsy tarehy ity. Tsy fantatr'i Richard izay hatao sy ny olona natao hihomehezana.
Avy eo anontanio hoe firy no hahatakatra ilay lahateny raha tamin'ny Espaniola no nanaovany izany. Betsaka hafa tsy maintsy nanangana ny tànany izy ireoMamerina aho, lTany Brezila ny kaonferansa). Stallman dia miteny amin'ny teny espaniola «mieritreritra aho fa tokony hitohy amin'ny teny espaniola, saingy tsy afaka mamerina ny nolazaiko aho (tehaka avy amin'ny vahoaka). TSY Fahombiazana tanteraka io. Tara loatra, tsy fahombiazana tanteraka, fa tsy fahamatorana TSY HANAIKA INDRINDRA IZAO (rsrsrsrs an'ny vahoaka) »
(Fanamarihan'i Diazepan: Misy aminareo ve, afa-tsy izaho, nahita ny 15 minitra voalohany? Nisy zavatra nolazainao ve mbola tsy voalaza izany teo aloha amin'ny fihaonambe hafa sa amin'ny resadresaka hafa sa amin'ny Internet?)
'Tara loatra, tsy misy ilana azy mihitsy. Efa tsy fahombiazana tanteraka io. Fialana (rsrsrsrsrs) Satria tsy misy ilana azy mihitsy. EFA VADINY IZAY NY FIZARANA MAHAY (huahuehuahue) TSY fantatro izay hatao. Tsy azon'izy ireo izany, tara loatra. " Ary tampoka ny iray tamin'ireo mpijery nanomboka nilaza «Gibea, gibe»Tamin'izay, tezitra izy ary namely ny mikrô tamin'ny latabatra, niantsoantso izy«TARA LOATRA, INDRINDRA IZAO NO TOKONY HATAO?»
(Fanamarihana avy amin'i Diazepan: Nisy avy / g / izy no nanao an'ity gif ity, ary nihomehy aho)
Rehefa avy naneho ny fahasosorany sy ny famoahana azy izy dia nilaza tamina tovolahy iray mba hamono ny fakantsary ary tsy te hamoaka ny firaketana an'ity lahateny ity (ao anatin'izany ny horonantsary izay jeren'izy ireo) ary manohy ny lahateny amin'ny fanizingizinan'ny besinimaro.
Ok, ekeko fa nihomehy aho fa nahatsiaro tena ho meloka aho avy eo (eny, na dia efa nihomehy ny gif aza). Amiko, amin'ny maha olona tratran'ny Aretin'ny Asperger, tena tezitra be aho miresaka sy tsy miraharaha, ary noho izany dia afaka miaina ny fahatezeran'i Richard aho. Ankehitriny, izany rehetra izany dia vokatry ny fiheverana diso izay miteraka tsy fifankahazoan-kevitra. Voalohany: Raha manao fihaonambe any Amerika Latina ianao, ary lazain'izy ireo amin'ny RMS fa afaka manao ny lahateny amin'ny teny Anglisy izy raha tiany izany, dia mieritreritra fa ny besinimaro tsy hoe mahay anglisy fotsiny (zavatra ifotony), fa fantatra ireo teny ampiasain'i Richard. Ny terminolojia manokana an'ny tontolo teknolojia no tiako holazaina. Faharoa, ary ho an'ny mpikarakara rehetra izany: raha aorian'ny lahateny 10 minitra dia tsapanao fa tsy nety ny safidin'ny fiteny, Maloto ianao. Rehefa vita ny lahateny, Tsy azo sakanana i Richard. Fahatelo sy manan-danja indrindra: Stallman tsy hahafantatra na inona na inona momba ny League of Legends, ka ny mandehandeha miteny hoe "Gib, gibe" dia vao mainka mampandeha sy manelingelina.
Dia izay. Faly tsingerin'ny Maya vaovao ary avelako amin'ity mailaka ity ianao miaraka amin'ny takiana ilaina amin'ny RMS hiteny ao an-tanànanao. Hamarino tsara fa mamaky azy tsara ianao raha tianao ny hanao lahateny ao an-tanànanao ary tsy mitranga ireo zavatra ireo
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » RS (Lahatsoratra iray, momba ny tantara ratsy mety hiteraka tsy fahazoan-kevitra)
Hahahaha ny fihomehezana tamin'ny GIF, tena nihomehy aho. Ny fahazoana matotra kokoa dia ny tsy fanajana ny besinimaro. Noheveriko foana fa ny dikan'ny RS dia i Richard Stallman hehe.
Toa tsy fanajana an'i Richard aho satria lazain'izy ireo fa afaka manome izany amin'ny teny Anglisy izy fa tsy misy mahatakatra na inona na inona, etsy ankilany, na iza na iza mandeha miresaka amin'i Richard ary tsy miteny anglisy ,,, ao amin'ny fireneko izany dia saika voatery miteny anglisy hiditra amin'ny Oniversite ary farany raha tsy azon'izy ireo fa sarotra ho azy ireo ny manakana azy amin'ny minitra voalohany miteny espaniola tsara i Richard !!
Amin'ny tenako dia heveriko fa tsy fanajana izany ary apoloako ny fahasosorana tsapan'i Richard ...
Marina, saingy heveriko fa somary nanitatra ny fanehoan-kevitr'i RS (Richard Stallman), ary io fanehoan-kevitra io ihany no nahatonga azy ho mahatsikaiky. Raha nilamina izy, dia tsy nisy akory ity sary GIF hafahafa ity (hahaha) nanenika ny mikrô nanoloana ny sodany.
Che, azafady, fa amin'ny firenena aiza ianao no mila mahalala anglisy hiditra sy hianatra bebe kokoa amin'ny oniversite? ary ny kolontsaintsika? ary ny fitenintsika? Tsiambaratelo ve izany oniversite izany? Mianjera aho ary mitsangana .. Andriamanitra!
Amin'ny asan'ny solosaina rehetra dia ilaina ny fahalalana Anglisy, ary aza manomboka amin'ny chauvinisme, fa raha "ny kolontsaintsika" dia miteny Quechua isika na mitovy aminy fa tsy ny fiteny eropeana toy ny Espaniôla, portogey na anglisy
Eto dia toa hatrany am-piandohana izy ireo dia mandrehitra an'i Stallman, fomba fitsaboana tsy fanajana no ihomehezan'izy ireo azy ary tena matotra izy. Te-hahalala ny haben'ilay kaonferansa aho, raha niresaka tamin'ny tontolo akademian'ny mpianatra izany, na nisokatra kokoa izy io, tsy azo eritreretina ny tsy hampianarin'ny oniversite Brezila ny haavon'ny teny anglisy amin'ny mpianany.
Amin'ny maha mpianatra anao, farafaharatsiny ao an-tanànako (Mexicali, Mexico), azonao atao tsara ny tsy mahazo diplaoma amin'ny sekolin'ny oniversite marobe raha tsy nahazo mari-pahaizana momba ny fiteny vahiny ianao, na anglisy, japoney na alemanina, izay mahazatra indrindra amin'ny asa izay ampianarina.
Amin'ny computing dia ilaina ny fahalalana anglisy na takatrao raha tsy mijanona ianao.
Eny, ao amin'ny fireneko dia misy oniversite maromaro izay ny fampianarana dia amin'ny teny Anglisy aza, ary amin'ny besinimaro dia takiana amin'ny sehatry ny siansa solosaina farafaharatsiny farafaharatsiny anglisy, any amin'ny oniversite na any amin'ny lisea dia heverina fa mahatratra ny mandroso antonony izy ireo. ambaratonga miankina amin'ny antony ilana izany fepetra izany na dia ny mahazo diplaoma amin'ny lisea aza, ka izany no antony raha tsy mahay miteny anglisy farafaharatsiny dia maty ianao.
Raha izaho no nanome ilay lahateny, ary raha nilaza tamiko izy ireo hiteny amin'ny fiteny tadiaviko, izay tsy miraharaha izany, ary izany no mitranga amiko, dakaiko ny mpitantana, tsy vita izany, ary avy eo ilay toa ratsy dia Richar Stallman (amin'ity tranga ity).
Na izany na tsy izany, mitranga ny zavatra amin'ny zavatra iray.
Tokony hiditra ao amin'i Pascal aho, tsy fanajana ny nataon'izy ireo taminy, saingy nilamina ihany izy, na dia heveriko fa raha nifantoka tsara tamin'ny kabariny izy dia tsy takona afenina ny fihetsem-po 😛
PS: Raha ny gif, satria tsy mifanaraka amin'ny "fety mafy" dia tsara kokoa ny "antoko mafy"
ahoana raha nihomehy maty aho dia ilay meme "install gentoo" http://tinyurl.com/d3g2hfy
ireo olona tsy mahatsiaro tena dia nihomehy izy ireo ary tsy nahatsapa fa misy olona romotra sy maratra, eo alohan'izy ireo (vao tsapany fa nikapoka ny mikrô izy). Mila mijanona ianao, mitehaka ary mihira: Richard .. Richard !!! maneho fitiavana, firaiketam-po ... fa samy matory sy saron-tava daholo izy ireo ka tsy nisy nahalala nanao ahoana tahaka ny zanak'olombelona.
Richard Mahantra ... Isaky ny miala any Amerika Latina izy dia manana traikefa ratsy foana.
Ilay lehilahy dia efa nanolo-tena hiala sasatra ary efa antitra tokoa amin'ny fahasoavana, efa legiona velona manolo-tena hankafy ny lazany sy hankafy ny fijinjana ny voankazo nandritra ny taona maro lasa mpanorina rindrambaiko maimaimpoana!
Fantatro ianao, tsy fantatro ny hafa, fa farafaharatsiny rehefa tezitra aho dia tezitra, ary izany dia tezitra, taorian'ny 15 minitra niresaka dia hita fa saika tsy nisy naheno na inona na inona, ambonin'ilay fa manandrana manamboatra azy izy ireo ary mihomehy ny olona.
Na izany na tsy izany dia tokony ho fantatry ny olona mialoha izay fiteny ho avy amin'ny fihaonambe, sa antenain'izy ireo hiteny amin'ny fiteny rehetra eran'izao tontolo izao i Richard? Ho ahy dia efa misy pitsopitsony be dia be miteny espaniola izy, miaraka amin'ny lantom-peony amerikanina saingy azony tsara.
Misy manana angona marina kokoa ve momba ny toerana sy ny fotoana nitrangan'izany? Ny ampahany voalohany amin'ilay horonantsary dia toa ilay lahateny mahazatra ahy, mitovy amin'ilay azoko kely teo aloha.
Ratsy ho an'i Stallman satria tezitra amin'ny olona, ​​ary ratsy ho an'ny olona mihomehy ... ary mbola ratsy kokoa ho an'ny mpikarakara aza ny tsy fametrahana mpandika teny mba hamolavola ny "dikanteny" amin'ny fotoana tena izy.
Tsy maninona raha naverimberina hatramin'ny famelabelaran-kevitra 1 tapitrisa teo aloha izay lazainy, dia zava-dehibe hatrany amin'ny lahateny iray izay namboarina hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany mba hahafantarana ny fomba hanombohana hahatakatra ny fomba nanatsoahan-kevitra ... tsy tsotra izany manomboka amin'ny fihomehezana, ary amin'izay fotoana izay dia azoko tsara ny fahasosoran'i Stallman rehefa nilaza izany tamin'ny olona izy.
Stallman tompoko mampihomehy …… Mankalaza anao izahay Saint Stallman.
Merry Noely ry zalahy, misaotra ny pejy
Tena tsy fanajana. Great Richard Stallman ary lozisialy maharitra maharitra!
Richard Stallman lehibe, andeha aho hanipy izany tavoahangy izany ho an'ny besinimaro farafaharatsiny.
Tena ratsy ny olona mihomehy. Fa raha amin'ny teny anglisy no anambarana ilay resaka. Ny olona tsirairay tsy mahita tsirairay, tsy mahalala fa ny manodidina azy koa tsy mahalala. Ka tsy misy sahy milaza azy hijanona ary hanohy amin'ny teny Espaniola.
Eo ny olana dia ny mpikarakara. Ary heveriko fa ny RMS manomboka izao dia hanontany ny mpanatrika arakaraka ny firenena misy azy ireo, amin'ny fiandohan'ny lahateny, raha aleon'izy ireo ny Espaniola na Anglisy. Mianatra amin'ny zavatra rehetra ianao…
Ny hatezerana ... ara-dalàna.
Hahaha angano ilay GIF 😀
Opa, mpanoratra / / g / entooman ao amin'ny bilaogy!
tsia izaho mpitrandraka
Anjarako ny an'ny tsirairay ary amin'i Andriamatoa Stillman no ilazako azy fa mila milamina izy, tsy Andriamanitra na fiankohofana izy, jereo, isan'andro aho manatrika olona isan-karazany amin'ny asako ary mitranga ireo zavatra ireo, dia alao an-tsaina izany indray mandeha izany. Efa nangoraka aho nefa tsy niasa
Ny zavatra niainako niaraka tamin'ny Breziliana, na tamin'ny lalao na tamin'ny resaka, dia tsy nahafinaritra velively.
mety hahafinaritra *
Na ny baolina kitra aza, resy ratsy izy ireo !!! 😎
Ry mahantra manankarena, tena ratsy toetra sy ratsy be amin'ny besinimaro aho mba hihomehezana noho ny fahasosorany, na dia tsy handà aza aho fa nihomehy koa aho rehefa nahita azy.
Bashito dia hoy izy:
Malahelo aho ny zava-nitranga sy ny tsy fanajana tanteraka an'i Stallman. Raha fantatr'izy ireo fa voan'ny aretina ilay tovolahy, maninona no ampiakarin'izy ireo amin'ny toe-javatra tsy mahazo aina sy mahasosotra toy izany izy? Izaho izay tsy mijaly amin'i Asperger dia mieritreritra aho fa handeha koa ary nanary ny zava-drehetra tany amin'ny helo.
Na izany na tsy izany dia mahazo traikefa ratsy avy any Amerika atsimo foana izy.
Mamaly an'i Bashito
RS tanteraka ..!
Manaja aho fa ny bandy eo amin'ny tranonkala dia manao izay tiany ary milaza izay tiany. Na izany aza, hitako fa tsy dia matsiro ny manoratra lahatsoratra momba ny pitipoà taloha.
Novakiako ity tranokala ity satria tiako ho fantatra momba ny rindrambaiko sy ny rafitra ary ny zavatra teknolojia.
Tranonkala maro no lasa faranduleos ary mifarana amin'ny lahatsoratra toy ny "Ny kiraro tian'i Steve Jobs hotendrena", sns, sns ...
Tonga any amin'ny faran'ny raharaha.
Heveriko fa tsy misy olona tia mandeha mankaiza mba hanao zavatra heverin'izy ireo ho zava-dehibe ary avy eo mahita fa noho ny hadalana, dia tsy misy ilana azy ny zavatra nataonao rehetra.
Anisan'izany ny mpanoratra ny lahatsoratra, na dia tsy hanaiky izany aza izy.
Fahazavana 17 azo farany!